Maamulka gobalka Banaadir oo hanti badan ka bur-buriyay hey’ad ay lacag badan ku diiwaan geliyeen. - jornalizem
Maamulka gobalka Banaadir oo hanti badan ka bur-buriyay hey’ad ay lacag badan ku diiwaan geliyeen.
Maxamed Cali Nuur, Gudoomiyaha Shirkada sameysa Tabeelayaasha loo isticmaalo ee loogu magac daray Icon Media, ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobalka Banaadir ay ka bur-buriyeen tabeelayaal ay magaalada ka surteen iyaga oo aan lagu soo war gelin.
“Maamulka gobalka Banaadir ayaa markii hore nadiwaan geliyay oo manihin sharci darro. Waxa ay noo ogolaadeen in magaalada aan ka taaganno Tabeelooyinka hadana waxa ay bilaabeen in ay bur-buriyaan tabeelayashii ogolaanshahooda lagu suray. Waa arin layaab badan”, Maxamed Cali Nuur ayaa soo jeedyay eedeyntaasi.
Waxa uu intaa ku daray, “Hadii Heshiiskii wax iska bedeleen waxa ay aheyd in nalagu soo war geliyo oo naloo sheego si aan qalabkeenna si nabad gelya ah ugu bixinno oo aan nalooga jejebin”.
Eedeynta uu jeedinayo Maxamed Cali Nuur ayaa waxa ay imaaneysaa iyada oo horay ay maamulka gobalka Banaadir usoo saareen kaas oo ahaa in Tabeelayaasha laga suray meelaha aan munasbka aheyn si deg deg ah looga siibo hadii kale maamulka gobalku uu bur-burin doono.
Inkasta oo si rasmi ah aan loo ogeyn sababaha keenay in tabeelayaasha shirkadaan la bur-buriyo ayaa hadana wararka qaar waxa ay sheegayaan in maamulka gobalka Banaadir uu shirkadaan ku war geliyaay in ay mar kale is-diiwan geliso hasa yeeshee ay maamulayaasheedu ka dhega adeegeen arintaasi.